အမျိုးသမီးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံ - ရှည်ရှည်တိုတို, နွေရာသီပူနွေးခြုံ-ထိုးပြီးစားဆင်ယင်, ဇစ်, ခလုတ်, ထဲမှာပါတဲ့, ဝါဂွမ်းကုန်ပစ္စည်းများ, ဖဲ, န့်ကို, ကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လို?
အမျိုးသမီးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံ - ဆိုကိန်းဂဏန်းအပေါ်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုများ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဝတ်ရုံရာသီသစ် - ခပ်သိမ်းသောမိန်းမတို့သည်ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ရိုးရာအမှုအရာ။ ဦးဆောင်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများအားဖြင့်တင်ပြသည့်ရွေးချယ်စရာများ၏မတူကွဲပြားတောင်မှအများဆုံးတောင်းဆိုမှုများဖက်ရှင်အနည်းငယ်အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်များကို select နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဂါဝန်ဆေးထည့် - က၏ attribute မှာဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသမီးဗီရို ကအမျိုးသမီးတွေကိုအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့်သက်သာခံစားရဖွင့်, သုံးစွဲဖို့အဖြစ်လွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သော။ ပင်အိမ်မှာ, အဆင်းလှကြည့်ဖို့တိုင်းမိန်းမပျို၏သဘာဝအလိုဆန္ဒပေးထားပါကအားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း fit မှအကြံပြုလိုတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ငယ်ရွယ်ပေမယ်ပြီးသားလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့ရာသီအလိုက် collection များကိုအိမ်သုံးဘို့အဝတ်အစားများပါဝင်သည်။
သဘာဝအပိတ်ထည်လုပ်ထားတဲ့ဇစ်သို့မဟုတ်ခလုတ်တွေနဲ့အဆင်ပြေအဝတ်: ပိတ်ချော, ဝါဂွမ်း, ထဲမှာပါတဲ့, flannel နှင့် flannel ရှပ်အင်္ကျီသက်ဆိုင်ရာရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီဖြစ်ကြသည်။
တယ်ရီနှင့်န့်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအလျားအနံ့အကျိုးသက်ရောက်မှု bathrobes ။
ရာသီအလိုက် hits - လှပသောပိုး, မွေး, velor နှင့် guipure ထုတ်ကုန်နှစ်စုံ, အ Cape, ဆင်မြန်း, ကွဲပြားအရှည်၏ဝတ်ရုံတစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဇုန်မှာ။
အလှဆင်: ပန်း, အရောင်ဂိမ်းထုတ်, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသွင်းအိတ်ကပ်နှင့်အဓိကလိုင်းများပြီးခြားနားနေသည်။
သဘာဝကပစ္စည်းများအနေဖြင့်ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုနွေရာသီဝတ်ရုံ? ပထမဦးစွာ, သူတို့ကအိမ်မှုကိစ္စလုပ်အပူအတွက်ပူမရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စတိုင်ပါမစ်ရှိလျှင်, ဥပမာတစ်ခုချိတ်ရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်စားဆင်ယင်-အင်္ကျီကိုပင်လမ်းပေါ်မှာ, သငျသညျမုန့်မဝယ်ဒါမှမဟုတ်အမှိုက်ထုတ်ယူနေတဲ့အခိုက်အဘို့အထွက် pop နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအ, အမျိုးသမီးရဲ့ပြည်တွင်းဝါဂွမ်းရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီဖဲ, ပိတ်ချောသို့မဟုတ်အခြားစျေးကြီးပိတ်ထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြသည်။
ပင်အိမ်မှာ lover စားဆင်ယင်၏ရွေးကောက်တော်မူသောစတိုင်မပြောင်းခဲ့ဘူးအလွယ်တကူမူရင်း flounces, Multi-အလွှာ, ပွင့်လင်းပခုံး၏ရိုးရှင်းသောပုံစံမျိုး, ဇာ INSERT, ပန်းထိုး, အချိုးမညီဖြတ်တောက်မှုနှင့်ရှည်လျားသောမတိုင်မီနှင့်အတူမိုးပြာရောင်သို့မဟုတ် Cato ထံမှချုပ်ဝတ်ရုံ, ဆေးထည့်ခြင်း, မင်းသမီးကိုမိမိတို့အဘို့မျက်စိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်နိုင်ပါသည်: သင်္ကန်း, ရှပ်အင်္ကျီနှင့်နေရောင်ဆင်မြန်း, boho , တိုင်းရင်းသားနှင့်စပျစ်သီးကိုဗားရှင်း, ပုံစံနှင့်ခါးပတ်နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ, သူတို့မပါဘဲ။
အားလုံးအသက်အရွယ်၏ဂုဏ်အသရေမှဒီဇိုင်နာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဂါဝန်ဆေးထည့်လက်ရှိမော်ဒယ်အားလပ်ရက်အပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ထဲမှာမသာ, တစ်ဦးမိဖုရားများကဲ့သို့ခံစားကြရသည်။ အဆိုပါပြပွဲမှာသရုပ်ပြပြီ:
ပိုကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်စားဆင်ယင်-သင်္ကန်းပုံနဲ့တူတဲ့, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမော်ဒယ် Maxi အလင်းနှင့်ပျံ;
ရှည်လျားတိုတိုအင်္ကျီ, ဿုံအလွယ်တကူအားလပ်ရက်နွေရာသီပါတီများအဘို့ရုပ်တုဆင်းတုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်သည့် beachwear, အစားထိုး;
သာပြည်တွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ negligees ။
chic အိမ်တွင်းပိုးအင်္ကျီ mini ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, MIDI နဲ့ Maxi, သာအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်တော့အနံ့နှင့်အတူတစ်ဦးအလင်းပိုးသို့မဟုတ်ဖဲ၏ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ မဆိုမော်ဒယ်ပီတိခန္ဓာကိုယ်အေးနှင့်ဝါဂွမ်းနှင့်အထဲမှာပါတဲ့ဖန်ဆင်းစတိုင်ပိုစျေးကြီးပစ္စည်းများရှာဖွေပါ။ ပုံစံမျိုးမှဖြေရှင်းချက်တချို့မော်ဒယ်တွေစိတ်ဝင်စားဖို့သို့မဟုတ်ဒြပ်ကြိုး၏တောက်ပထို့အပြင်နှင့်အတူပိုးကနေချုပ် INSERT တစ် laconic ပန်း, ရှိသည်, ဇာ၏ပုံစံအတွက်ရှိပါသည်။ လူကြိုက်များသောစတိုင်များ: လင်းနို့, အနံ့ထံမှဖြောင့်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်ပိုး-ဝတ်လုံ - များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ် နေ့စဉ်ကြက်သွန်နီ ။
ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အအေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလညဦးယံအချိန်အိမ်ပြန်လာများနှင့်အထူးသဖြင့်အပန်းဖြေရေချိုးသို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းပြီးနောက်, သင့်အကြိုက်ဆုံးနွေးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဂါဝန်ပေါ်တွင်တင်လျက်, ကုလားထိုင်အတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှင့်အတူဆင်းထိုင်ရန်။ ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ပြည်တွင်းရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီဟာလက်ရှိတစ်နေ့လျှင်ပြဿနာများအားလုံးတစ်ဦး jiffy အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟု, အဆင်ပြေပျော့ပျောင်းနှင့် fleecy ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေ, ရှည်လျားထုတ်ကုန်များနှင့်အမှုအရာနေဆဲဿုံမြင့်မားသောခေတ်မှီသားမွေးဖိနပ်နဲ့ပေါင်းစပ်အနံ့နှင့်အတူ MIDI ကြောင့်သူတို့ကဝယ်လိုအားကောင်းနေသည်။
မိန်းမတို့အဘို့အိမ်လုပ် waffle သင်္ကန်း
ဤအမှုအရာတို့ကိုရုံအပူပေးခန်းများနှင့်ရေကူးကန်အတွက်အစားထိုးမရဖြစ်ကြအမျိုးသမီးအမြဲဝတ်ဆင်ရန်သာယာသောထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းကနေလှပသောတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဂါဝန်, သူတို့ကအစိုဓာတ်ကိုဿုံကိုစုပ်ယူနေကြသည်နှင့် crumple ပါဘူး, ကြောင့်သောသူတို့ချ, အဲဒီနောက်စခန်းအိတ်ထဲကယူကြပြီကိုတောင်အပြီးအကြီးအကွညျ့ရှု ။ ဖက်ရှင်တောက်ပခြင်းနှင့်အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြေရှင်းချက်များတွင်အောင်မြင်စွာအသေးစားကိန်းဂဏန်းအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်, ကော်ဖီထဲမှာ "န့်ကို" မှကြီးစွာသောအမျိုးသမီးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံကိုကြည့်, အဖြူအပြာနှင့်အနီမောင်းသောအဆင်းအရောင်နှင့်သင်၏ခါးပတ်အောက်မှာကြီးကြပ်မှူးဖြတ်မည်။
အအေးမိဘို့ - နွေဦးနဲ့နွေရာသီအဘို့အပိုးသို့မဟုတ်ဖဲ၏, ပင် brocade သို့မဟုတ်ကတ္တီပါဒခလုတ်, ဇစ်သို့မဟုတ်အနံ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူရှည်လျားတိုတိုမော်ဒယ်။
Two-အပိုင်းအစစုံခြင်း, Cape, ဆင်မြန်း, ဝတ်ရုံ, ရှပ်အင်္ကျီ, ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီ, တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံ, ရှပ်အင်္ကျီ, အင်္ကျီ, ဝတ်ရုံ Guipure နှင့်စီးဆင်း။
ခေတ်မှီပုံစံမျိုး: pritovannye ပိတ်ထည် - တစ်လမ်းကြောင်းသစ်ပန်း, ဂျီဩမေတြီ, စိတ္တဇပုံစံများနှင့်တိုင်းရင်းသား; ဆနျ့ကငျြဘဂိမ်း - တစ်ခုတည်းထုတ်ကုန်များတွင်အများအပြားအရောင်ပေါင်းစပ်; လက်ပန်း, ဇာသို့မဟုတ် guipure INSERT ၏ ruffles, ruffles, အသံအတိုးအကျယ် applications များ, ကွဲပြားခြားနားပြီးအိတ်ကပ်, ကော်လာနှင့်အနား။
ရာသီစတိုင်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းအိမ်များအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းဝတ်ရုံ, ဆေးထည့်ကြပါပြီ - ကြမ်းပြင်သာခါးပတ် fixed နေကြသည်ရှိရာအနံ့နှင့်အတူထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာ:
အခွားအင်္ကျီလက်ချောမွေ့သို့မဟုတ်အိုးပေါကျကှဲ silhouette နှင့်အတူ "Bat";
Ladies ဝတ်ရုံဖြောင့်ဖြတ်ခြင်းနှင့် raglan အင်္ကျီလက်;
ပိုအဆင်ပြေနှင့်တူသောမူပိုင် collection များကိုကမ္ဘာ့စင်မြင့်ပေါ်မှာပေးအပ် Fancy တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံ, စတိုင်စားဆင်ယင် အများအပြားနေ့စဉ်လေးတို့သည်လည်းတစ်စုံလင်သောအခြေခံဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သဘာဝအလျောက်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သည့်တည်ဆောက်သူတို့ကိုယ်သူတို့၏အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအိမ်မှာအကြီးကြည့်ရှုခွင့်ပြုကြောင်းသာယာသော, စွယ်စုံစတိုင်များ၏လုပ်နေကြသည်။
ရောင်စုံနှင့်တောက်ပအဆင်ပြေဆင်မြန်းသည် T-ရှပ်အင်္ကျီ, အခမဲ့, razletayki သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ဆင်းကျဉ်း; ပုံနှိပ် Maxi မော်ဒယ်ခါးခါးပတ်မှအထင်ကြီး V-shaped neckline နှင့်အတူအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု;
စွဲစေခြင်းမရှိဘဲစားဆင်ယင်-လေမှုတ်စက်တစ်လည်စည်း-in ကိုပေါငျရိုးနဲ့အနံ့-အခမဲ့နှင့်ဂရိတစ်ဦးက trapezoid;
တစ်စက်အရှည်နှင့်အတူတောက်ကဆစတိုင်စားဆင်ယင်အတွက် Ladies ဝတ်ရုံ;
ဝတ်ရုံဆေးထည့်မော်ဒယ်များအိမ်ပြန်ဘို့အဆင်ပြေနှင့်ဿုံတော်ပါတယ် calico ကသဘာဝပစ္စည်းများအနေဖြင့်ချုပ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, သူတို့တစ်ဇစ်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကျွမ်းတဝင်ပေမယ့်အချိန်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားဒီဇိုင်နာအလှဆင်နှင့်အတူမှာတော့အမှုအရာကိုအလွယ်တကူမဆိုအလုပ်အပေါ်ယူနိုင်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာအကြီးခံစားမိတို့နှင့်ကြီးသောကြည့်ရှုပါ။ စျေးနှုန်းချိုသာပိုးနှင့်အိမ်တော်အဘို့အခြားထုတ်ကုန်များ, သူတို့ညံံ့မပြုခဲ့သကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါချိတ်ကိုလည်းပုံစံမျိုး၏ Element တစ်ခုရဲ့, အဖြစ်မညီမညာဖြစ်နေသောအောက်ဆုံး, ရှပ်အင်္ကျီနှင့်တီရှပ်စတိုင်များ, application များနှင့်ဆန့်ကျင် INSERT ၏ရရှိမှုသည်အဘယ်မှာရှိခလုတ်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ဝတ်ရုံ။
Excellent ကအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပြည်တွင်းအမျိုးသမီး velor ဇစ်နှင့်အတူရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီအဖြစ် flannel, ဝါဂွမ်းနှင့် flannel လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကအသေးစိတ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဥပမာ, မူရင်းဖိနပ်, ခြေအိတ်, ဆံပင်ကလစ်များနှင့်အသေးစားဖြည့်စွက်ပါလျှင် ဆံပင်အဘို့အရာဘာကြိုးနှင့်ချည်နှောင် - တစ်အိမ်ရှင်မ၏စမ်းသပ်မှုနှင့် flirty image ကိုရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကအဆင်ပြေရှိနေခြင်းဆွဲထားဖြစ်ကြပြီးကြောင်းအတွက်သူတို့မည်သည့်ဖက်ရှင်အတွက်အဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးဣတ္ဝတ်ရုံဇစ်, အခါးဒါမှမဟုတ်တင်ပါးတခုတခုအပေါ်မှာထပ်နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့, ကောင်းကင်ဘားနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြောင့် silhouette အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုတောင်းဆို။ အနက်ရောင်အနီ, အစိမ်း, အပြာနှင့်အ Marsala, ပျော့ပျောင်းသောအရောင်များကိုတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အဝတ်နှင့်, ပစ္စည်းများ၏ texture ပေးထား, အသေးစားပန်းသို့မဟုတ်စိတ္တဇပုံစံနှင့်အတူများ၏တောက်ပခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောအရောင် Self-ရောင်စုံအမှုအရာတို့နှင့်အတူ။
မိုးသည်းထန်စွာပိုး, ဖဲသို့မဟုတ်ဂျာစီ၏အလွန်ဣတ္ရှည်လျားတစ်သင်းလုံးကကစားသမားဂါဝန် - တနင်္ဂနွေကိုကျော်အိမ်ပြန်ဘို့လှပသောအဝတ်နှစ်ခု-piece အများနှင့်ဇိမ်ခံ negligees, ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ကီမိုနိုပုံစံများကိုကြည့်ကြီးမြတ်စုံကိုခါးသို့မဟုတ်ala Natasha Rostova ကနေမီးတောက်။ အနံ့အပေါ်တစ်ဦးဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဝတ်ရုံကိုသာတွင်, ဒါပေမယ့်လည်းခလုတ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားချိတ်အတူဇစ်နှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလှပသော hairpins fixed ။
မှောင်မိုက်ဒါပေမယ့်မှတ်မိလွယ်တဲ့အရောင်အမြဲတမ်းကြော့ကြည့်သောအရာတို့ကို: burgundy, အနက်ရောင်, ရေတပ်, ပုလင်းများနှင့်ကတ္တီပါနီအရိပ်။ နို့နှင့်အတူကော်ဖီထဲမှာစိမ်သဘာဝအမျိုးသမီးအလှအပသဘာဝကနူးညံ့မှုတင်ဒါ Maxi ထုတ်ကုန်မှ Add ကောငျးကငျ, ပုလဲနှင့်မြအရောင်, အသေးအဖွဲ - မီးခိုးရောင်နဲ့ဂန္ Beige, ဒါပေမယ့်အင်္ကျီခြားနားအသံထွက်ကိုတင်ပြလျှင်: ခါးပတ်, edging, အိတ်ကပ်, ကော်လာ, ဒါမှမဟုတ်အနိမ့်-key ကိုအဆင်တန်ဆာ ဝတ်လုံသို့မဟုတ်ထိုး၏အောက်ခြေပေါ်မှာ။
ဒူးအထက်ပြည်တွင်းထိုးပြီးဝတ်ရုံ - ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဗီရို၏အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးအဆင်ပြေပစ္စည်းများရဲ့, သူတို့လှုပ်ရှားမှုကဆင်းကိုင်ကြဘူးအမျိုးသမီးတွေအလွယ်တကူချစ်စရာကောင်းနှင့် flirty ကြည့်အိမ်တော်ကိုလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအသုံးဝင်အရာရာ၌ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ရဲ့စတိုင်များအမျိုးမျိုးကိုသာဖြတ်အပြည့်အဝရှည်လျားသောဗားရှင်း၏ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်ပုံစံမျိုးနှင့်ဒီဇိုင်း။
ရွေးချယ်မှုအပြည့်အဝသာယာအဆင်ပြေမှုများဆီသို့ဦးတည်လုပ်ပါက - အဝတ်အစားကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ် ဇစ်နှင့်အတူ ရုံဒူးအထက် oversayz စတိုင် elongated အကို T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီများကိုထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်ခလုတ်, ဒါမှမဟုတ်တိုတိုအင်္ကျီစားဆင်ယင်။ ပင်အိမ်ပြန်ဖက်ရှင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုခညျြနှောငျ, ဖဲ, guipure နဲ့အလင်းပိုးနှစ်ခုမှာတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း၏မိတ်ဆွေတို့ကို။ တစ်မောအိပ်နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာဂျာစီ၏လုပ်မူရင်းကြည့် mini ကိုရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီတစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူမော်ဒယ်ရှိသည်, ဇာနှင့်အချိုးမညီအရှည်နှင့်အတူကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ကြည့်ရှုပါ။
Modeling နှင့် Slim အတွင်းခံ
အဆိုပါ fluffy စကတ် tulle ၏ဖန်ဆင်းထားသည်
ကိတ်မုန့်ကွတ်ကီး - ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများကနေချိုမြိန်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပန်းခြံ "Mini ကိုဣသရ"
နေမာ vin ဒီဇယ်နဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဦးမည်
ကလေးများအတွက် Teething - အမိန့်များနှင့်ကြီးထွားဝိသေသလက္ခဏာများ
ဓာတ်လှေကား LDL - ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
မှ Ian McKellen '' တစ်ဦးက Midsummer ညများတွင် "ရှိတ်စပီးယားပွဲတော်သို့တက်ရောက်
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ - နွေဦးကို 2014 ခုနှစ်
ငါးမွေးကန်ငါး - သူတို့အဘို့အစောင့်ရှောက်မှု